जनअपेक्षा कहिले पुरा हुने हो सरकार ? - मालागिरी समाचार
१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०९:३३
Home›विचार/विश्‍लेषण›जनअपेक्षा कहिले पुरा हुने हो सरकार ?
विजय जि. एम.
देश संघीयताको अभ्यासको क्रममा छ । संविधानले देशलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यन्वयनको दिशामा अग्रसर छ । संविधान अनुसार सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको छ । संविधान कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बीच क्षेत्राअधिकारको बारेमा द्वन्दको स्थिति छ । नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भएर होला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा केही अन्योलता सृजना भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच आरोप प्रत्यारोपको अवस्था छ । जनताले स्थानीय सरकारबाट धेरै आशा राखेका छन् । जनता सुशासन र समृद्धिको पर्खाइमा छन्। स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । चुनावको समयमा जनतालाई जुन सपना देखाइएको थियो त्यही सपना पुरा होस् भन्ने व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा विकासका काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्दछ । स्थानीय जनताले अनुभूति हुने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग नजिक भएर काम गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुसँग मिलेर जनताका समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी इमान्दारीका साथ काम गरेको खण्डमा विकास भन्ने असम्भव छैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै जनजीविकाका माग र समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भइरहेका विकासका योजनाहरुको निरन्तर र नियमित अनुगमनको आवश्यक छ । काम गर्ने कर्मचारी र निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरुलाई उचित सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठग निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरुलाई तुरुन्त कार्वाही गर्नुपर्दछ । विकास निर्माणका काममा भाग खोज्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नुपर्दछ । कतिपय ठाउँहरुमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा काममा दिलाई भइरहेका छन् । कर्मचारीहरु आफ्नो भाग खोज्न यो वा त्यो नाममा ठेकेदारको विल पास नगरेर अनावश्यक दुःख दिइरहेको देखिन्छ । रकम निकासामा ढिलाई गरिदिने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
कस्तो बिडम्बना ! न्यायको निम्ति बुवाआमा अनशन बस्नुपर्ने स्थिति छ । निर्मलाका हत्यारालाई कार्वाहीको माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरी दमन हुन्छ । सुनतस्कर काण्डको छानबिन के भैरहेको छ ।
स्थानीय निकायमा विकास निर्माणका कामहरु कि कछुवाको तालमा छन् कि ठप्प छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको वर्ष भइसक्यो । तर विकास निर्माणका कार्यहरुमा अझै नजर पुगेको देखिदैन । घोराही तुलसीपुर सडकखण्ड अन्तर्गत निर्माधीण सडक र पुलहरुको अवस्था वेहाल छन् । निर्माण शुरू भएको धेरै वर्ष भयो तर निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । जनतालाई सास्ती मात्र भएको छ । पुल र सडक निर्माण भइरहेका ठाउँहरु दुर्घटनाका कारण भएका छन् । जनप्रतिनिधि मौन छन् । सडक विभाग कहाँ छ थाहा छैन् । संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु घोराही तुलसीपुरको सडकमा बारम्बार आवतजावत गर्ने गर्दछन् । तर पनि कसैले चासो राखेका छैनन् । सडक र पुल निर्माण गर्ने अवधि सकेर समय थप गर्दा पनि निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । सडक विभागले ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? घोराही तुलसीपुरका सडक र पुल अनुगमन गर्ने नाममा लाखौको बजेट खर्च गरेर अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन गर्न तामझामको आवश्यक छैन् । निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, नियमित र आकस्मिक अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ । निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन र चेतावनी दिए पनि कार्यन्वयन भएको देखिदैन । करोडौको बजेटमा निर्माण हुन लागेका सडक र पुलहरुमा श्रमिकहरु ४–५ जनाले काम गरिरहेको देखिन्छ । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन । निर्माण कम्पनी र ठेकेदारमा इमान्दारीता र नियमितता हुने हो विकास निर्माणका कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुने रहेछ भन्ने प्रमाण तुलसीपुर र भोजपुर जोड्ने पुल निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई लिन सकिन्छ । घोराहीको कटुवा खोलामा निर्माण भइरहेको पुलभन्दा धेरैपछि निर्माण भएको तुलसीपुर भोजपुर सडक जोड्ने पुल समयमा नै सम्पन्न भइसकेको छ तर कटुवा खोलाको पुल सम्पन्न कहिले हुने हो अझै थाहा छैन । विकास निर्माणका काममा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । अन्यथा निर्देशन र अनुगमनको कुनै अर्थ छैन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर पनि जनप्रतिनिधिहरुले जनताका समस्याहरु वेवास्ता गर्नु दुर्भाग्य हो । प्राकृतिक स्रोतहरु अनियन्त्रित रुपमा दोहन हुँदा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु बेखबर छन् । नदीजन्य वस्तुहरुको ओसारपसारको लागि जनप्रतिनिधिका साधन र जनप्रतिनिधिका आसेपासेका साधनहरु प्रयोग भइरहेका छन् । ठेकेदारहरुसँग साँठगाँठ गरेर कमिशनको चक्करमा कतिपय ठाउँहरुमा जनप्रतिनिधिहरु कमाउने धन्दामा लागेको जनगुनासो पनि सुनिन्छ ।
निश्चय पनि निर्माण व्यवसायका आफ्नै समस्या छन् । तर समस्याको लागि समस्या खडा गर्नुहुँदैन । निर्माण व्यवसायका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायी र सरकार टेबलमा बसेर समस्या समाधनको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य किन ढिलो गरिरहेको छ ? सडक विभाग र राजनीतिक दलहरुले चासो राख्नु आवश्यक छ । विकास निर्माणका कामहरुमा राजनीतिक दल लगायत राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि खबरदारी गर्नुपर्दछ । जनता पनि जागरूक हुनु आवश्यक छ । अनुगमन ठेकेदारसँग लेनदेन गर्ने माध्यम नहोस् । लेनदेनको लागि निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई कार्वाही गरेको जस्तो गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नहोस् । काम गर्नेबेला शंका र विश्वासका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीप्रति जनताले विश्वास गर्ने आधार न्यून छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु जनविश्वास गुमाउने क्रममा छन् । स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धताहरु अझै पुरा हुने छाँटकाँट छैन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु विस्तारै विस्तारै हाँसोका पात्र बन्दैछन् । जनप्रतिनिधिहरु कामभन्दा पनि भाषण र घोषणा गर्नमा मात्र सीमित छन् । घोषणाहरु कार्यन्वयन कहिले हुने हुन थाहा छैन् । प्रतिबद्धताहरु कहिले कार्यन्वयन हुने हुन न जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ न जनतालाई थाहा छ । सबै भगवान भरोसामा छन् । जनताको ढाड भाँच्ने गरी करको वृद्धि भएको छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारलाई दोष दिने र प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दोष दिने काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच तालमेल र समन्वयको अभाव देखिएको छ । जनअपेक्षा कहिले पुरा हुने हो सरकार ? जनता जान्न चाहनन्न् ।
संघीय सरकार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको स्थिति पनि बेहाल छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रस्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । सरकारी निकायमा भ्रस्टाचार झन मौलाएको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । निर्मालाको हत्या भएको महिनौ भइसक्यो तर सरकारले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन् । निर्मालाका हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै स्वस्फुर्त रुपमा युवाहरूले टाँसेका पोस्टरहरु पनि सुरुक्षाकर्मी प्रयोग गरेर च्यात्ने काम भएको छ । सरकारको यो रवैयाले निर्मालाका हत्यारालाई सरकारले नै संरक्षण गरेको त होईन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सरकारले निर्मालाका बुवालाई मानसिक सन्तुलन गुमाउन बाध्य पारेको छ । कस्तो बिडम्बना ! न्यायको निम्ति बुवाआमा अनशन बस्नुपर्ने स्थिति छ । निर्मलाका हत्यारालाई कार्वाहीको माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरी दमन हुन्छ । सुनतस्कर काण्डको छानविन के भइरहेको छ । आम नागरिकलाई थाहा छैन । सुनतस्करका आरोपिहरु अदालतको आदेशमा धमाधम छुटिरहेका छन् । सरकारलाई कर्मचारी समायोजन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । सरकार मातहतका कर्मचारीहरु सरकारले पठाएको कार्यक्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् । देशको समग्र विकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य हो । शिक्षा दिने शिक्षक हुन । तर अहिले सरकारले शिक्षकहरुको माग र समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । राहत र अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा विद्यालय जानुपर्ने शिक्षकहरु आन्दोलनको लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था छ । फलस्वरूप विद्यार्थीको दैनिक पठपाठनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । देशमा दिनहुँ हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेका छन् । सरकार निरीह देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेर नयाँ युगको शुरुवात भएको घोषणा गर्ने सरकारले तस्कर, बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी र भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गरेर अर्को नयाँ युगको घोषणा गरेको हेर्ने ठुलो इच्छा छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरको गाउँगाउँमा वाटो पुग्दै
चालु बर्षमै सबै थारुहरुको सिकलसेल जाँच गर्छौैं– ...